Tsipy kanetibe: lasan-dry Luc Kely ny amboara | NewsMada
Tsipy kanetibe: lasan-dry Luc Kely ny amboara
Nanjakan’ny Malagasy indray ny fifaninanana tsipy kanetibe, natao tany Frantsa ny faran’ny herinandro lasa teo. Norombahin’ny ekipa nisy an’i Luc Kely sy i Mamy Ronaldinho ary i Tselonina ny amboara, teo amin’ny “Supranational du Puy – en – Velay 2018”. Adin’ny samy Malagasy ny famaranana, tamin’ity. Resin’izy telo mirahalahy tamin’ny isa mavesatra, 13 no ho 0, i Mamy Patrick sy i Pap’s ary Racle.
Tsy niady ny fihaonana satria vita tao anatin’ny “trois mènes” ny lalao. 45 mn monja ny famaranana. Tao anatin’ny heriny ary nampiseho ny fahaiza-manaony izy telo mirahalahy. Tsy nisy niainana ny tifitra nataon’i Tselonina sy i Luc Kely, na niezaka nanao ny ho afany aza i Mamy Patrick sy i Pap’s.
Marihina fa ekipa malagasy telo no indray tafita niatrika ny lalao manasa-dalana. Ankoatra izay, norombahin’i Mamy Patrick kosa ny fandresena teo amin’ny lalao ho an’olon-tokana, tamin’ity “Supranational du Puy – en – Velay” ity. Mbola fihaonan’ny samy Malagasy ihany koa mantsy ny famaranana, tamin’izany. Resin’i Mamy Patrick, tamin’ny isa 13 no ho 9, i Zigla.